Marka hore, isku darka, 1 dhigay 20L taangiga isku dhafan; Xawaaraha isku qasiddu waa la hagaajin karaa; Mashiinka wax lagu xoqo wuxuu si fudud u qaadaa oo dib isugu laabaa; Waqtiga CW iyo waqtiga CCW waa la hagaajin karaa; Taangiga ayaa 90degree kara inuu udaarato si fudud marka labaad, extrusion, 1 set 10L tank; Ka gadaal dhinaca dambe oo riix fr ...
2020 CBE ee lambarka waababka Shanghai N4-H21
Sanadka 2020, waxaan kaqeyb galnaa carwada CBE ee Shanghai laga bilaabo 8-da ilaa iyo 12-keeda. Waxaan soo bandhigeynaa badeecadaheena ugu muhiimsan, sida mashiinka buuxinta dhalaalka dhalaalaya, nuuca riixida mashiinka mascara mashiinka mashiinka, mashiinka riixaya budada yar, mashiinka calaamadeysan ee jiifka ah, baakadaha qurxinta ee dhalaalaya bushimaha, l ...
Waxaan u qaabeynay mashiinka buuxinta ee Estee Lauder
Mashiinka buuxinta Mashiinka EGSF-01A waa mashiin buux buuxa oo otomaatig ah oo loogu talagalay soo saarida aasaaska dareeraha iyo jelida toner. Miiskeedu wuxuu u jeedaa miiska oo leh 12 pucks, 3 xarun shaqo Waxay leedahay 4set oo ah 10 L taangiga kuleylka leh mashiinka mashiinka wax lagu shubo / dhalooyinka i ...
2020 Diseembar ayaa la cusbooneysiiyay mashiinka riixaya budada iswada leh
Mashiinka riixaya budada is haysta wuxuu sameyn karaa hooska indhaha, casaanka, labo waddo keega, aasaaska qurxinta oo la riixay, budada wajiga la cadaadiyey. Mashiinkayaga riixaya budada is haysta wuxuu samayn karaa budo la riixay oo wareegsan iyo waliba budada laba jibbaaran ee hal mashiin ah. Mashiinkayaga mashiinka riixaya budada iswada leh waa nooca wareega ee ...
2020 Oktoobar mashiinka buuxinta dhalaalka dhalaalaya, waxaan ku hagaajinaynaa ku saabsan taangiyada kuleylka ee isbadal lagu sameeyay
Marka loo eego shuruudaha macaamiisha, waxaan ka sameysannaa mashiinka buuxinta dhalaalaya bushimaha leh haanta kululaynta. Taangiga kululeeyaha waxaa lagu qalabeeyaa qalabka wax lagu qaso iyo qalabka cadaadiska si loogu daro cadaadiska dareeraha dareeraha sare leh si uu si habsami leh hoos ugu socdo markii la buuxinayo. Haamaha kululaynta waa taangiga jaakada, dhexda waa heatin ...